၂၀၀၉; ၁၁ နှစ် အကြာက (၂၀၀၉)
၅ လက်ရှိကစားသမားစာရင်း (၂၀၁၆)
နည်းပြ = ဦးငွေထွန်း
အသင်းကို ငယ်ရွယ်သော အားကစားသမားများဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဂိုးသမား ကိုကိုအောင်သည် ဂရုပြုဖွယ် အရည်းချင်းရှိ အားကစားသမား တစ်ဦးဖြစ်သည်။
FW Ivan Caelos
MF Lar Din Maw Yar
↑ Han Oo Khin (March 9–15, 2009). "New era for football".
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်_ဘောလုံးအသင်း&oldid=328238" မှ ရယူရန်
၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၆၊ ၁၄:၃၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။